Vavaka ho an'i La Santa Muerte hahazoana vola. ? Miasa ao anatin'ny 24 ora!
Vavaka ho an'ny fahafatesana masina hahazoana vola Tena mahery izy io ary izany no mahatonga ny olona maro hanohy hiditra amin'ny laharan'ny mpino ary misy fahagagana maro nomen'ity Masindahy ity.
Ny fangatahana vola dia zavatra marim-pototra, izay mety tsy ho fantatra dia ity vavaka ity ho an'ity fangatahana manokana ity, na dia misy fangatahana aza azo atao ao.
Izay rehetra manainga vavaka dia tsy maintsy manao izany am-pinoana avy ao am-po, na inona na inona andriamanitra izay angatahina fangatahana, satria io no hany takiana.
1 Hanampy ahy ve ny Fahafatesana Masina?
2 Vavaka ho an'i Santa Muerte ho amin'ny vola
3 Inona ary ity vavaka ity?
4 Rahoviana aho no afaka mivavaka amin'i Santa Muerte, mba hisarihana vola?
Hanampy ahy ve ny Fahafatesana Masina?
Ity Saint ity dia afaka manampy ny olona rehetra izay manatona azy amin'ny finoana fa azo angatahina izay angatahiny.
Na inona na inona tsy azo atao dia ny mahita izay angatahina, ny zava-dehibe dia ny fahatsiarovan-tena fa ny zavatra atao dia hetsika feno finoana sy fahadiovana ara-panahy satria ny vavaka dia fitaovam-piadiana mahery vaika ary toy izany no tokony hampiasaina amin'ny fanajana be. ary faharanitan-tsaina
Vavaka ho an'i Santa Muerte ho amin'ny vola
Fahafatesana Be Voninahitra, zazavavy fotsy vavy matanjaka, sakaiza mahatoky sy mpiara-dia amiko mahatoky amin'ny làlana izay itokiantsika amin'ny fotoana rehetra misy ny mafy sy sarotra ho antsika, ary ho azontsika rehetra ny fifaliana hahita anao amin'ny andro farany amin'ny fiainantsika.
Ianao izay mahalala ny tsiambaratelon'ny vintana, avelao ny kodiarana mitodika mankamin'ny toerana misy dikany fotsiny.
Avelao aho handray anjara amin'ny herinao ary miantso ahy izay angatahiko aminao, tsara vintana sy harena ary fanambinana.
Ny alitaranao no ho vavolombelona hanamarina ny lazaiko ho anao, tompon'ny tsiambaratelo lehibe momba ny vintana sy ny vintana.
Esory amin'ny fofoninao ny Lady Mahery ary handrahona ny loza sy loza manjo ahy, esory ny tsy fatiantoka ka ny fahazavana izay ampamirapiratra ny fahazavanao dia tonga amin'ireo mila izany.
Mba omeo vintana tsara aho, amin'ny harena sy ny fandraharahana, ny vintana tonga eo am-baravarako, ary io harena sy fanambinana io dia manjaka ao an-tranoko.
Misaotra anao amin'ny fanatitra aho ary hanana ny fahatokiako mandrakizay ianao. Misaotra anao namana mahatoky sy mpiara-miasa amiko vavy malalako, ny fahafatesako masina niankohoka.
(Ataovy eto ny fangatahanao eto miaraka amina finoana marobe.)
Vavaka iray izay azontsika itokisana ary ahazoantsika manatona ny tanjona ara-bola napetrakay.
Tsy maninona izay maha zava-dehibe na sarotra ny fahasarotana.
Mahery izany vavaka izany ary afaka manampy toe-javatra rehetra ara-toekarena mety hitranga amin'ny fiainana izany.
Ny vola no mahatonga ny ahiahy satria raha tsy misy izany dia tsy manana hery mividy isika izay zava-dehibe.
Izany dia vavaka izay afaka manampy be dia be anay raha nanao izany isika asa ratsy sasany toy ny hoe eo amin'ny sehatra iray izay tsy fantatsika mazava ny fampiasam-bola tokony hataontsika.
Hiverina amintsika haingana sy fahagagana ny vola, izay no antony hanaovana an'io vavaka io am-pahombiazana.
Rahoviana aho no afaka mivavaka amin'i Santa Muerte, mba hisarihana vola?
Tsara ny fotoana rehetra hampiakarana an'io sy ny vavaka hafa rehetra, ny zava-dehibe dia ny fahafantarana izay ataontsika.
Fantaro fa fihetsika amin'ny finoana izany ary ahazoantsika fahagagana izay angatahinay, satria raha tsy misy finoana dia saika tsy azo atao ny mamaly ny fangatahana, ny finoana no lakilen'ny vavaka rehetra.
Lazao ny vavaka amin'i Santa Muerte ho an'ny vola be dia be amin'ny finoana.
Vavaka mafy ho an'i Santa Muerte ho an'ny asa